Iyo Apple Watch ichiri yakanakisa moyo rate yekutarisa kana zvasvika kune zvinopfeka | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ichiri yakanakisa mita yemoyo kana zvasvika pakupfeka
Chidzidzo chitsva kubva kuStanford University chinosimbisa kuti Apple smart wachi inoramba iri nhasi yeimwe yeakanakisa zvishandiso zvekuyera moyo yedu zvichienzaniswa nezvimwe zvishandiso zvatinazvo pamusika nhasi. Zviripachena isu tinogara tichitaura nezve zvishandiso zviri kunze kwenzvimbo yekurapa, mawachi uye zvishongo zvinotengeswa kune vashandisi mazuvano uye kuti vanokwanisa kutenda nekuda kwema sensors avo kuyera macalorie atinopisa kana kurova kwemoyo.
Ichi chidzidzo chakavakirwa pavanhu makumi matanhatu uye vese vakapfuura nekushandisa zvishandiso zvakasiyana zvine basa rakafanana neiyo Cupertino wachi pachayo, pamusoro pekupa ruzivo nezve ziviso dzinosvika kwatiri pane mbozhanhare, vanoyera moyo yedu chiyero kana zvakaenzana kuverenga macalorie isu atinoshandisa kurovedza muviri. Mune ino kesi vakafananidza iyo Apple Watch ne Samsung Gear S60, iyo MIO Alpha 2, iyo Microsoft Band, iyo Fitbit Surge uye zvimwe zvimwe, uyo anokunda maererano neyakaenzana chiyero kuve Apple Watch.
Mune ino kesi, chidzidzo chinotaura nezvekukanganisa mwero we2% chete pachiyero chechikwata chehunyanzvi uye kana uchienzanisa nevamwe iyo Samsung Galaxy Gear S2 yaive nekanganiso yekukanganisa ye6,8%. Misiyano iri pakati pezviyero zvakaitwa nevanhu makumi matanhatu ava yaive yakawanda mukati mavo pavaichovha bhasikoro, nepo apo vazvipiri ava pavaimhanya, zvikanganiso zvekuyera zvaive zvakakwirira. Nezve iyo kuyerwa kwemakoriyori akapiswa panguva yekurovedza muviri iyo Fitbit Surge ndiyo chaiyo yainyatso kusiya Apple Watch kumashure uye kune vamwe vese vaikwikwidza, yepedyo pachiyero ichi kuFitbit quantifier yaive Microsoft Band uye pekupedzisira PulseOn.
Chatova chidzidzo chechipiri chakaitwa pane sensor yemoyo yeApple Watch munguva pfupi uye hapana mubvunzo kuti mune ino sensor inoita kunge isina mukwikwidzi. Saka basa rakanaka kubva kuApple mune izvi uye nekuvandudza mamwe masayero mushanduro dzinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ichiri yakanakisa mita yemoyo kana zvasvika pakupfeka
Apple inotangisa mavhidhiyo matsva ePasi Zuva 2017
Brain Puzzle, mutsva uye unonakidza mutambo weMac App Store